Wararkii ugu dambeeyey ee Puntland & Saraakiil hor leh oo is casilay kadib markii…. – Puntlandtimes
Wararkii ugu dambeeyey ee Puntland & Saraakiil hor leh oo is casilay kadib markii….
March 12, 2019 Puntland PL
GAROWE(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee Puntlandtimes.com ay helayso ayaa sheegaya in uu is casilay abaan duulihii ciidamada Daraawiishta Puntland Gen. Siciid Maxamed Salaad (Gorayo-cawl) oo warqadiisa is casilaada u gudbiyey madaxweyne Siciid Cabdullaahi Denni.
Arintani ayaa salka ku haya dhaq dhaqaaqyada ciidamada Somaliland ay kawadaan gobolka Sanaag, waxaana ka horeeyey abaan duulaha oo isna is casilay taliyihii ciidamada Daraawiishta Puntland oo ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkii uu ka hayey ciidamada Puntland.
Xaalada deegaanka Yubbe ayaa kacsan, waxaana dhaq dhaqaaqyo ciidan ay ka socdaan qaybo badan oo kamid ah gobolka Sanaag.
Madaxtooyada Puntland ayaa iyaduna si adag uga hadashay dhaq dhaqaaqa ciidamada Somaliland oo ay ku tilmaamtay duulaan ka dhan ah Puntland, halka madaxweyne Denni uu ku hanjabay in dagaal ay kaga jawaabi doonaan duulaanka Somaliland.
Abshir Nuur Faarax says:
Beeenta iska dhaaf. Abaanduulaha in la bedelahayo ayaa oga waana is casilay ka hor. Aqoon wanaagsan uma lahaan arrimaha ciidamada, waana nacas weyn ninkakan duuf ku baxaha la yiraahdo Goraya-Cawl.
Gaas baa nimankan meesha keenay, qof walba waa garan karaa dhib xiligii Gaas aan haysan ciidamada inuusan hada haysan laakiin loo joojin maayo dalkana waa la difaaci.